mercredi, 02 mai 2018 10:16
Sary Gasypatriote Andasibe
Ampiasaina ireo Service National, ka dia misy ampahany amin'izy ireo no isahana fotsiny izay fambolena hazo sy voankazo izay.
Asiana ny toerana fambolena masomboly (pépinière), izay hiteraka asa fihariana maro tokoa, atsaraina ny fikarohana momba ireny voankazo sy ala ireny, atosika ny sampana mpikaroka eny amin'ny Université.
Ho jerena ny fitaovana toy ny "canadair" na hélicoptère ho an'ny tafika mpiandry ala.
Hisy ny toeram-piofanana momba ny ala.
Madagasikara dia atao tanjona ny fambolena bio, ka tandremana tokoa ny fampidirana ny hazo sy fambolena ny OGM eto amintsika, tsy manakana ny fikarohana sy fanatsarana ny fambolena afaka miaro tena amin'ny hain-tany sy ny bibikely anefa izany.